ch3မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch3မာကု
3:1 တဖန်တုံ, သူသည်တရားစရပ်သို့ ဝင်.. And there wasaman there who hadawithered hand.
3:2 And they observed him, to see if he would cure on the Sabbaths, သူတို့ကသူ့ကိုစွပ်စွဲအံ့သောငှါဒါ.
3:4 ထိုသူတို့အားဆို၏: “Is it lawful to do good on the Sabbaths, သို့မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကို, to give health toalife, or to destroy?” But they remained silent.
3:5 And looking around at them with anger, being very saddened over the blindness of their hearts, သူကလူကိုပြောဆို၏, "။ သင်၏လက်ကို Extend" ထိုအခါသူကတိုးချဲ့, and his hand was restored to him.
3:6 ထိုအခါဖာရိရှဲတို့, ထွက်သွားရာ, immediately took counsel with the Herodians against him, သူတို့ကသူ့ကိုကိုဖကျြဆီးခွငျးငှါအဘယ်သို့မှအဖြစ်.
3:9 And he told his disciples thatasmall boat would be useful to him, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအစုအဝေး၏, lest they press upon him.
3:11 And the unclean spirits, when they saw him, fell prostrate before him. ထိုသူတို့သညျကွှေးကျွော, ဟုဆို,
3:12 “You are the Son of God.” And he strongly admonished them, သူတို့ကသူ့ကိုလူသိများဖြစ်စေမည်.
3:13 ထိုအတောင်ပေါ်သို့တက်, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:17 and also he imposed on James of Zebedee, and John the brother of James, the name ‘Boanerges,’ that is, ‘Sons of Thunder;''
3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, နှင့်အာလဖဲ၏ဂျိမ်း, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,
3:19 ယုဒရှကာရုတ်နှင့်, သူကိုလည်းသူ့ကိုသစ္စာဖောက်.
3:21 And when his own had heard of it, they went out to take hold of him. သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်: “Because he has gone mad.”
3:28 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, that all sins will be forgiven the sons of men, and the blasphemies by which they will have blasphemed.
3:30 သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်: “He has an unclean spirit.”
3:31 မယ်တော်နှင့်ညီအစ်ကိုတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့. ထိုအပြင်မှာရပ်နေ, သူတို့အထံတော်သို့စေလွှတ်သ, သူ့ကိုတောင်းဆို.
3:32 ထိုအခါလူအစုအဝေးသူ့ကိုန်းကျင်ထိုင်နေစဉ်. ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်, "အကယ်, သင့်အမိနှင့်အသင်၏အစ်ကိုတို့အပြင်ဘက်များမှာ, သငျသညျရှာကြံ။ "
3:33 ထိုအခါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်, ဟုသူကပြောသည်, "အဘယ်သူသည်ငါ့အမိသည်နှင့်ငါ့ညီအစ်ကိုတို့?"
3:34 ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုန်းကျင်ထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုပတ်လည်ရှာဖွေနေ, ဟုသူကပြောသည်: "အကယ်, ငါ့အမိ, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့.
3:35 ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုပြုတော်မူပြီသောသူသည်, အတူတူငါ့အစ်ကိုသည်, နှင့်ငါ့နှမများနှင့်မိခင်။ "